DAAWO WARKA:Shirka Muqdisho, amarka Beesha Caalamka, dhaarta madasha,heshiiska jawari & Khayre, dhaqdhaaqyada Qoorqoor iyo arrimo kale.
September 15, 2020 Xuseen 20
Kulanti wanaagsan ku soo dhowaada wararka fiidnimo oo aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirka Muqdisho, kulankii beesha caalamka iyo Axmed Madoobe, warsaxaafadeedka madasha, culimo digniin dirtay, kulankii Jawaari & Khayre iyo arrimo kale.
Faarax boqolka dollar laguu soo diro waa shaqeeyey… Xaarmaajo pidoffil crazy baad calankii u dhiibtey…
Wallaahi Soomaaliya sharmuuto iyo qaniis madaxweyne wey ka noqonkaraan.
Faarax wallaahi did lacag siisaa adiga ayaa ugu horreeya,Farmàajo has Ku marmarsiiyoon,Faarax was saxafi maa in qariyo waxa puntland ka dhacaya ayaad doonaysaa?waayo baad u xagxaganaysaan ninkaan Faarax ah? waxa Somalia,siiba Puntland ka dhacaya in LA qariyo miyaad doonaysaa? Wax là qariyo qurun baa Ku jira,Puntland OK caddaalad ka jirto,Somali oo Chan ayey caddaalad ka dhici lahayd,Hooyadii dhibaatada Somaliyeed AKA federal iyo qzbiil Maxamuud saleebaan ayaa Hawiye ka saxiixday,in shacab so waliba u wada dhashay qabiil loo kala qaybiyo,Maxamuud saleebaan ayaa ka masuul ahaa,had a markii,federal LA qaatayna cidda ka ooyeysa waa maxamuud saleebaan, xaggee LA idiin raacaa? Daarood has Ku so dhuuman,Daarood meesha uu maanta joogo adinkaa geeyey,Kablalax,Faroole kuwii uu shalay lahaa Somali maa aha OK melez zanawi ciidankiisa u dhiibayey,wiilal Daarood ah OK ” ONLF” ahaa maa ahayn,allaah inta uu abuuray wuxuu ugu necbaaday ” munaafaq àma laba wajiile. adiga meeshaa ha inoo joogto,wax badan ayaad IGA baran doontaa insha Allah.
Qofka haduu tuulo kusoo koro ilbaxnimadu ku yartahay maxishoono ileyn geel dhac ah baa lagu koriyey Sorry BAREBAAS
Aflagaadada halla joojiyo; waa amar MADAXWEYNE.
Waxaa aad iisoo jiitay sida aad sawirka u muujiday. Masaxweynaha qaranka Soomaaliyeed (min Lawyacaddo illaa Libooye) iyo Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, waad is raacisay; halka aad Madoobe, Deni iyo Khayre daba taagtay UHUHU; waa sida ay tahay, Kenyaa saddexdaba laga xukumaa. SSC aniga ayaa iska leh. Wbt
Aan ku dara e, waxa aad ka ilowday kooxda Khayre, in aad ra’iisel wasaarihii la riday u dhiibto calanka KENYA! Marka danbe, haddii alle idmo, haka illaawin. Waa KAMAU/TESAFAYE kooxdiisa.
Farmàajo,so kale wax looga qaadi maayee,Intii Kaluun iyo Digit LA isku zoo cuno miyàa Dhuuso lagu dayi doonaa?.
Madaxweynaha Maamul goboleedka SSC,Hillaac,Somali badan ayaa Ku taageeraysa haddii aad bannaanka timaaddid,idaacadaha ka so hadashid,90% gobolka aan ka imid wey taageeri doonaan,Darwiish walba Oo bannaanka is keena.gobolka 2 aad Somalia ugu weyn garabka SSC ayey taagan yihiin,waligàa Laguna ciilin,illaa aad adinku is ciishaan.
@ Hillac,mid ogow,kuwo qabiillo ayna ahayn Sheehan jirey,had a bannaanka ayey is keeneen,sida, suldaanka maakhir,A.A.Xade labaduba waa maxamuud saleebaan,kan hore,Warsangeli ayuu Sheegan jirey,kan kale Mreexaan ayuu Sheegan jirey, hadda waxay Ku zoo dhamaatay waad arkaysaa,godkii at galaanba waa looga Daba tagayàa,illaa ay saaxiga keenaan o Somali noqdaan.simple as that. Ceebay tacaal.
Talo fiican ayaad siisay saaxiibkaa HILLAAC aka RAKE.
Wuxuu qoray magacyada qabaa’ilka dega SSC; wuxuu ugu hormariyey Gabooyo iyo Fiqishinni. Ma nin Dhulbahante ah baa labadaas liiska ugu hormarin lahaa?
Ninkaan wuxuu ka yimid inta u dhexeysa Bulacle (Mulacle) iyo Muqokori. Wuxuu maqlay qolo la yiraahdo Fiqishinni oo Dhulbahante ku dhex jirta ayaa 1991 kadib sheegatay Habar Gidir. Marka, hunguri ayaa ka galay dhulka SSC. Ma oga in nimakaasi yihiin dhowr wadaad oo Dhulbahante ka dhex welimaysta, awood kalena aan lahayn. Waryaa hooy, wadaaddadaas ha u aqoonsan zakadooda iyo welimadooda.
@Jubalander- Aad baan kuu salaamay jaalle.
Waa runtaa waligay layma ciilin, laakiin maantay iyara haysataa. Mid baanse ku xasuusinayaa, mandaqaddda SSC ee aan MADAXWEYNAHA u ah maanta may dhalan, horay bay bannaanka isu keentay, laakiin hiil bay wayday waana laysugu tagay. Taasuse kama leexinayso in ay maalin ay noqotaba damaceeda gaadho.
Haddaan dib kuu yara celiyo, waxaa jiray shir weyne TALEEX lagu qabtay oo maamul goboleedka lagu unkay, majirin shir intaa in le’eg ay ka soo qayb gashay iyaga oo aan taageero ka haysan dawlad iyo maamul kale toona; dad kaasi iyaga ayaa is abaabulay.
Intaa waxaa dheer, in maamulkaasi uu ku soo beegmay waagii Xasan Culusoow uu isku kabkabayey Gal-nus iyo Hir-Shabeele (maamulladii beesha Hawiye). Waad ogtahay oo Gal-nus xitaa ma dhamma gobol iyo bar; waa gobolka Gal-gaduud, degmada Hobyo, degmada Xeridheere & xaafad ka tirsan degmada Gaalkacyo. Xasan sidaas ayuu ku aqbalay isaga oo weliba isu keenkeenay, taaydii buuxday ee iskood isu abaabushayna waa diiday!
Madaxtooyo ku sheegii Soomaaliyana markay sidaa dhabarka noogu jeedisay waxaa ka horreeyey dagaal ay nagu qaadeen Hargaysa iyo Garoowe, iyaga oo adeegsanaya dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeyey ee lahaa DEKEDO & MADAARRO. Marka in aad maanta i tiraahdid bannaanka iskeen aad baan uga xumahay kaamana filayn; taariikhdu ma duugoowda e dib u raac. Isma dhiibin, weli waa dagaalamayaa, taydayna ku danbaynaysaa insha Allah.
Xasanoow markii aad shalay dhisaysay maamuullada beeshaada (oo aan xitaa qaar buuxin shuruudihii, oo aad kayga diidaysay adiga oo garab ka helaya Garoowe) way kuu ahaatay in aad maanta u dooddo maqaamka iyo metelaadda gobolka Banaadir.
Mid baanse kuu sheegayaa, inta aadan maqaam iyo metelaadda Banaadir u doodin, waxa ka horaysa in aad senatoor Yalaxoow ka saarto xeradii ciidanka BADDA Soomaaliyeed. Waxa ay ahayd in aad DHAGAXAANTA ka qaaddo Muqdisha. Waxa ay ahayd in aad ka baxdaan dhulalka iyo guryaha dawladda in aad ka baxdaan. Waxa ka horreeya in aad dadka hantitooda u celisaan. Waxa ay ahayd in aad magaalada nabad ka dhigtaan. Markaas baad MAQAAM iyo metelaad ku doodi kadhaan.
Maxay ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa. Maxaad maqaam raadisaan ma idinkaaba magaalaba haya. Hay’aadka caalamiga ahi garoonkay dadka ku qaabilaan, way ka baqaan in ay magaalada dhex maraan. Xildhibaanadu BAKAARO kama soo adeegan karaan, waana adiga iyo kuwa kula haybta ah waxa waxaa samaynaya. Meesha senatoorkii laga kari la’yahay ka bax xerada ciidamada, waa maxay maqaamka ay raadinaydaa?!
Gunaanadkii, Muqdisho ma istaahisho in maqaam iyo metelaad la siiyo, SSC ayaa kaga xaq leh. Maamul Hawiye ah baan soo kordhinaayaa kaagana shalay baan diiday kaa aqbali maa ee wax kale keen. Jubalander, kor u bax indhahana fur, taariikhdu ma duugoowdo ee la soco. SSC aniga ayaa iska leh.
Hillac,wallàahi aad iyo aad ayaan kuugu raacasanahay intaa aad sheegtay,laakiin marka San Ku Lee yahay is a zoo Sahara waxaan ka wadaa,ka dhex baxa dhabayaco iyo Indoor,Somali adinkaa ugu taariikh cheer,ugu taariikh fiican,maanta waxa dhexdiinna ka dhacaya markii aan maqlo wallaahi aad iyo aad ayaan uga xumaadaa,asxaabtayda into badan wa Dhuloos,taariikhda at suubiyeen, wiilashayda ayàan baraa,midday kale Anita O reer Gedo ah dhiigayga in badan ayaa dhuloos ah.
@@@@ A. Arar- Waxaa kugu qafilan wax lagu jabay; soomaaliya waxa halkaa dhigay waa QABYAALAD. Waana ku faraxsanahay in aan iyaga mudnaanta siiyey oo aan iska hormariyey; waa dadka aan MADAXWEYNAHA u ahay, waana ay iga mudan yihiin in aan dadkayga soo jiito.
Taa haddan ka gudbo, waxa aad aflagaadayday reer Fiqishini. Anaa taa ka xaal siiyeey; cidna reerku kuma dhex jiraan, ee meeshii alle ku beeray bay deggan yihiin. Dhulbahante iyo reerkaasina waxba kuma kala duwana; waa dad walaalo ah, in loo kala abtiriyana ma mudna. Weligood bayna Hawiye ahaayeene ma aysan sheegan wixii ka danbeeyey 1991 sida aad u dhigtay. Si kastaba, Fiqishini waa Dhulbahante,
Dhulbahantena waa Fiqishini. Haddii ay mar mar isku dhacaanna, carab iyo dibnaa isugu dhow oo mar mar way is qaniinnaan. Waa jaahilnimada Soomaalida in ay yiraahdaan reerkaasu annaguu nala degaa. Waar cid cid la degani majirto e, cid walba meeshii alle ku abuuray bay degantahay. halla iska daayo jaahilnimadaa iyo quursiga dadaka la quursanayo. Wbt
Aa latahay! Fiqishinni ma aha Dhulbahante oo Dhulbahante ma aha Fiqishinni. Waxaan hubaa haddii uu kuray yar oo Dhulbahante ahi agtaada fadhiyo adiga oo waxaa ku hadlaya in uu ilkaha kaa soo qubi lahaa. Fidnoole iyo waxaad tahay diradiraale mukhaawi ah. Bahararsame ayay cadawaadda inta Bah-Majeerteenka ah ku gaamurtay oo haddii aad ugu sokeyso inan-layaal baad u tahay.
Bahararsamuhu inta aanay Bah-Majeerteenka u soo dhicin ayay labo qarni Dhulbahantaha kale ka takoornaayeen oo ay gummeyste oo dhan kala safnaayeen. Tolkoodii ugu sokeeyay ee ay Garaad Faaraxa isla ahaayeen taariikhda madoow ee dhex taalla waa macruuf. Aanooyinka ay Dhulbahante ku kala dileen way wada qoran yihiin. Waxa maanta sha’niga iyo shimbuirka ka dilay na waa isla reerkaas. Annagu reerkaas aawadiisa xaasha in aynu tolkayo Siciid Harti xuma kaga sheegno. Runta iyo xaqa uusan noocaagu waxba ka ogayn iga hoo maanta.
Dhulbahantaha kale ayaa tolkooda reer Puntland ka codsaday in ay garab iyo gaashaan ba uga noqdaan luggooyada ay Bahararsamuhu ku hayaan. Dhagarta ay cadoowga beeshan la maleegeen ayaa laga dheregsan yahay. Haddii ay Majeerteenku talada siyaasadda iyo masiirka Dhulbahante federaalka uga wakiil nooqdeen was sidii looga baahnaa curad kasta oo nasab ah. Waxay taasu ceeb la tahay oo ka xun kuwa Hartiga iyo Daaroodka guud naawilaya ee se sida xun ugu hungoobay in ay isku jabiyaan oo kala jabiyaan, sidaada.
Annagu Dhulbahante u ma kala xiilin karno inta ay siyaasadda ku kala qaybsan yihiin, laakiin xuquuqdooda beel ahaaneed ayaynu degelkooda iyo dowlad goboleedkooda Puntland u maraynaa in aynu Xamar uga soo dhicinno. Haddii Eebbe sokadii Puntland iyo tolweynahanu aanay jirin Dhulbahante maanta la ma arkeen. In aad tahay khaa’in tuug ah ee Siciid Harti ugu soo xoqanaya kala irdheynta tolweynaha Puntland waa kaa muuqataa, heli se maysid abidkaa. Rakaha aad tahay iyo saxrahaaga Cadaado ha ku deeqeen maandhe.
Boodhariyo maxaa iska kbuseeya pinto( puttaland) iyo SSC? Putaland 3 wiil oo Walall ah ayaa 5 tii sanaba mid xukumaa,waliba maanta mid aan u dhalan dhulkaas ayaa xukuma O’Day yar O lawada og yahay in uu Somali xittaa ahayn,meelahaas iyo Afrikada bari(outh east African) ayaa maanta xukuma,shacabka reer puntland waxba kama qarsoona waa Somali xalaal ah.
Boodhariyo,, waa qof waaalan waxan uu ka hadlayo waxba kama jiraan.
kkkk Ereyada HILLAC waxaa ka mid ah.
kaa aqbali maa.
“maa” waa laahjad hawiye.
Gal-nus xiitaa ma dhamma
kkkk yaa arkay dhulbahante xiiqaya oo xiitaa leh.
war nin yahow Iidoor baa cid kale iskayeelkiisa ku xiiqaye cida aad tahay goobta ku matal oo energy-gaas faraha badan cidkale haku xayeysiin.
HILLAC iyo JUBALANDER waa hal qof.
Hadalkooda ayaa kashifay.
sidii dameer xaar ku dhagay ayey XIITAA ku hayaan.
(Mulacle) iyo Moqorkoris
qof mulac iyo moqor ku soo koray caaqibo haka sugin
Ahmed Hersi says:
Maamulka buntilaan waa inuu xirra qofkii ugafah buntilaan sidii Coldoon oo kale soomaaliland ugasha afar sano.Ninkaan daanweyne(Cabdiqaadir Mohamed Geylan)